Abathengi Musa ukuThengisa ukuFezekisa kwakhona Martech Zone
NgoMgqibelo, Agasti 29, 2009 NgoLwesihlanu, ngoJuni 12, 2015 Douglas Karr
Olunye lolona tshintsho lumangalisayo endikholelwa ukuba imithombo yeendaba zentlalo luzisile kukutshatyalaliswa kwe ogqibeleleyo uphawu. Abasakulindeli abathengi ukugqibelela… kodwa silindele ukunyaniseka, inkonzo yabathengi, kunye nokuzalisekiswa kwazo naziphi na izithembiso inkampani ebeka ulindelo lwazo.
Kwisidlo sasemini sabathengi kwiveki ephelileyo e Izisombululo zeBitwise, UMongameli kunye ne-CEO uRon Brumbarger uxelele abathengi bakhe ukuba iBitwise ngeke bayazenza iimpazamo… kodwa baya kuhlala besenza konke okusemandleni abo ukuba bachache ngokupheleleyo kubo kwaye bajonge iimfuno zabathengi. Kwakukho abathengi abalulekileyo abambalwa etafileni- kwaye impendulo yayingenakuba nethemba ngakumbi. Kwakukho ukuncoma ngamxhelo mnye kwinkonzo yabathengi kunye nenkxaso ebonelelwe ngabasebenzi beBitwise.
I-IMHO, abaphathi beempawu ezintle bahlala besebenzisa ukwenza umsebenzi omangalisayo wokugcina ukugqibelela kwempawu ngokuthumela imiyalezo engaguquguqukiyo, imizobo kunye nobudlelwane noluntu. Ezo ntsuku zisemva kwethu ngoku, nangona iinkampani zingasakwazi ukulawula okanye ukusebenzisa amajelo eendaba ezentlalo kunye nokuba abathengi nabathengi bathini ngabo. Abathengi bakho ngoku babambe isitshixo kuhlobo lwakho.
Oko kunokubonakala kuyinto eyoyikisayo ekuqaleni… inkampani yakho inokuba ifuna ukuyigcina ogqibeleleyo kraca uyaphila. Sukuba nexhala ngayo. Ngapha koko, yeka. Wenza umonakalo omkhulu kwinkampani yakho ngokuzama ukugubungela iziphako zayo kunokuba ubhengeze kwindawo evulekileyo. Yonke inkampani inamandla kunye nobuthathaka kwaye umthengi uhlala elindele ukuba iingxaki zenzeke. Ayizizo iimpazamo ezenzekayo, yindlela inkampani yakho efumana ngayo kwakhona.
Nokuba ngaphakathi kokulinganiswa kwemveliso kunye nokuphononongwa, kunjalo. Ukulinganiswa kweenkwenkwezi ezi-5 kunokwenzakalisa intengiso yakho kunokuba ubancede. Njengoko ndifunda uphononongo lwemveliso, ndihlala ndisiya ngqo kuvavanyo olubi. Andikutsiba ukuthengwa, nangona kunjalo. Endaweni yokujonga izimvo ezingezizo, ndithatha isigqibo sokuba ingaba bobo buthathaka endinokuhlala nabo. Ndithengise igajethi enkulu enamaxwebhu awoyikekayo nangayiphi na imini! Andifundanga ncwadana zemveliso.
Xa ndibona umlinganiso weenkwenkwezi ezi-5, ndihlala ndishiya uphononongo luphela kwaye ndijonga kwenye indawo. Akukho nto igqibeleleyo kwaye ndifuna ukwaziswa ngokungafezeki. Andisayithengi imfezeko kwakhona. Andisakholelwa kwimfezeko kwakhona. Kwintetho ye-e-yorhwebo kunyaka ophelileyo, umenzi ophambili we-elektroniki wathi uphononongo olufanelekileyo luhlala lonakalisa imveliso yabo. Akukho mntu ukholelwa kwimfezeko, nokuba.
Kungabonakala kungekho ngqiqweni, kodwa unokufuna ukuthengisa amandla akho kwaye uvume ngokupheleleyo ubuthathaka bakho ukuba ungathanda ukwandisa ukuthengisa, usete ulindelo, kwaye ube nakho ukulufezekisa. Umthengi owonwabileyo ayinguye umthengi onemveliso egqibeleleyo… ngumthengi owonwabileyo kwinkampani yakho, indlela abaphumeze ngayo, kwaye - okona kubaluleke kakhulu - ukuba uchache kangakanani kwiimpazamo zakho okanye ukusilela.
tags: 5 stariireyithingi zabathengiuphononongo lwabathengiukuhlolwa kwabaxhasiReviewsUkulinganiswa kweenkwenkwezi
Izixhobo zokuSebenza ngaMnye